Yini okufanele siyinake lapho sifaka ama-Solar Panels? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ngokwanda okukhulayo kobuchwepheshe belanga, izindleko zayo zisondele ezindlekweni zokuthenga imoto entsha. Kulezi zinsuku, abalingani abaningi abancane bacabanga ukuthi bangawafaka yini amaphaneli elanga. Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokusebenzisa lobu buchwepheshe ukonga ugesi, lezi zinkinga ezilandelayo zidinga ukubhekwa.
1. Ngabe uphahla lumboziwe?
Uma uphahla lwakho lumbozwe izihlahla cishe unyaka wonke, ungahle ungabi nalo “ilanga” elanele ukulisebenzisa. Ngaphambi kokuqhubeka, umhlinzeki noma uzodinga ukukuhlola lokhu. Uma uphahla lwakho luqondiswe kahle futhi lunelanga elanele, qiniseka ukuthi luhleleke kahle. Amapaneli elanga manje anewaranti yeminyaka engama-20 noma engama-25. Uma uphahla lwakho ludinga ukulungiswa eminyakeni embalwa ezayo, kufanele lunakekelwe noma lushintshwe ngaphambi kokufakwa. Ngale ndlela, awudingi ukuchitha isikhathi esengeziwe nemali ukufaka amaphaneli kabusha. Sicela uqinisekise ukuthi ama-solar panel wakho awaphuli noma yimiphi imithetho yenhlangano yabanini bamakhaya engavimbela ubuhle.
2. Bala ukusebenza kahle kwamandla kagesi
Isilinganiso selanga esifakiwe esiphezulu osidingayo sincike ekusebenziseni kwakho ugesi, ngakho-ke ngaphambi kokwenza uhlelo, kufanele uqale wenze ukucwaningwa kwamandla futhi ufune ukuthuthuka kahle. Ukusiza osonkontileka ukweluleka ngohlobo nobungako besistimu yakho, qoqa imininingwane emayelana nokusetshenziswa kwekhaya lakho nogesi.
3. Imaphi amandla elanga anenjongo kakhulu?
Njengamanje, ubuchwepheshe obubili obukhulu belanga ubuchwepheshe be-photovoltaic, obusebenzisa ukuhlelwa kwamabhethri ukuguqula ukukhanya kwelanga kube ugesi; kanti okwesibili ubuchwepheshe bamandla ashisayo, obusebenzisa ukukhanya kwelanga ukushisa amanzi noma umoya ukuze kusetshenziswe ngaphakathi. Uma indlu yakho isebenzisa amandla amaningi ukufudumeza, noma uma uhlala endaweni lapho ukufudumeza uphethiloli kubiza kakhulu maqondana nogesi, khona-ke ukutshalwa kwamandla kagesi okushisa ngelanga kungaba ibhalansi engcono yokukhokha. Kodwa-ke, amandla okushisa elanga ayivelakancane emakhaya, ngakho-ke kungaba nzima ukuthola abafaki abafanelekayo.
4. Ungaxhuma kanjani kugridi?
Imininingwane ethile iyahluka kuye ngokuthi uhlalaphi, kepha umgomo wukuthi njalo uma uxhuma kwi-grid yomphakathi, kunezinkinga ezithile ezidinga ukucaciswa. Ngabe umphakeli kagesi unezaphulelo ezifanele zikagesi zokukuheha? Uma seyixhunyiwe, inkampani yamandla kagesi izowukhokhisa kanjani futhi nini ugesi owenziwe ngamandla akho elanga kumthethosivivinywa wokuqeda ingxenye yomthethosivivinywa kagesi?
Ukulinganisa amamitha kuyindlela yokukhokha. Uma ikhasimende elihlala endaweni linohlelo lwe-photovoltaic ophahleni, ukukhiqizwa kwalo kungadlula ugesi osetshenziswa ngumndeni emini. Ukuthengisa ugesi ongawusebenzisi emuva kugridi kungonga izikweletu zikagesi futhi uthole nembuyiselo yezezimali. Imvamisa le mibuyiselo ifakwa kwisikweletu sakho sanyanga zonke ngendlela yesikweletu.